असोज १० 2077
संविधान संशोधनको प्रस्ताव एमालेलाई मान्य नहुने
असार २४ २०७४ .
विराटनगर असार,२४ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले देशका विरुद्ध ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव एमालेलाई मान्य नहुने बताएका छन् । संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्रियता बढाइरहेका बेला प्रतिपक्ष पार्टीका अध्यक्ष ओलीको यस्तो भनाइ बाहिर आएको हो । स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न नभएसम्म संविधान स...
बालुवाटारमा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाको बैठकमा के भयो ?
असार २४ २०७४ रासस
काठमाडौं असार २४–संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सहमति जुटाउने प्रयासस्वरुप बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुको बैठक भर्खरै सकिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आब्हान गर्नुभएको बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाएर तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्ने...
दल दर्ताका लागि राजपाले दियो आवेदन
असार २३ २०७४ .
काठमाडौं असार २३– राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेको छ । पार्टीको विधानमै गजेन्द्रनारायण सिंहको नाम राख्ने अडानबाट राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झा पछाडि हटेपछि दल दर्ता गराउने सहमति भएको हो । असार २१ गते नै पार्टी दर्ता गर्ने तयारी भए पनि पार्टी विधानको प्रस्तावनामा नै नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक गजेन्द्...
गुल्मीमा खुल्लाबाट एकजना महिला मात्रै विजयी
गुल्मी असार,२३– गुल्मी जिल्लाका २ नगरपालिका, १० गाउँपालिका र ९३ वटा वडाहरुमा खुल्ला सदस्यबाट जम्मा एकजना महिलाले मात्र जीत हाँसिल गरेकी छन् । धुर्कोट गाउँपालिका वडानम्वर–२ पिपलधाराको खुल्ला सदस्यमा माओवादी केन्द्रकी ३१ वर्षिया कमला घर्तिले पुरुष उम्मेदवारलाई हराएर ईतिहास रच्न सफल भएकी हुन् । कांग्रेस–माओवादी संयुक्त प्यानलकी उमेदवार घर्तीले रुख...
भरतपुरको मतगणनासम्बन्धि विवादको सुनुवाई सोमबारसम्मलार्इ सर्‍यो
काठमाडौं ,असार २३ । भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना विवाद सम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाई फेरि सरेको छ । सो वडामा पुनमतदान नभई पुनः मत गणनाको माग गर्दै भरतपुर(१९ का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान विक र त्यही वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश द्वय मीरा खड्का र अनिल सिन्हाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार मुद्दाबारे बहस सुरू गरे पन...
रुपन्देहीको १६ स्थानीय तहको नतिजा (सूचीसहित)
भैरहवा असार,२३ । रुपन्देहीमा रहेका सबै १६ स्थानीय तहको नतिजा घोषणा भएको छ । जसमध्ये एमालेले ७, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ४, कांग्रेसले २, माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिक र स्वतन्त्रले एक-एक तहमा जित हासिल गरेका छन् । एमालेले बुटवल उमहानगरपालिका, सिद्धार्थनगर, सैनामैना, तिलोत्तमा नगरपालिका र सियारी, शुद्धोधन, कञ्चन गाउँपालिका गरी ७ तहको ...
३२४ स्थानीय तहको मतगणना सकियो, अव १० तह वाँकी
काठमाडौं, असार २३ । यही असार १४ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तह निर्वाचनकोे आज शुक्रबार सम्म ३२४ स्थानीय तहको मतगणना कार्य सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगमा रहेको संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्र (जेइओसी) बाट प्राप्त जानकारीअनुसार, हाल ६ जिल्लाका १० स्थानीय तहको मतगणना कार्य जारी छ । हा...
भरतपुर प्रकरणमा आज बहस हुदै
काठमाडौं असार २३– भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको बहस आज हुदैछ । अदालतले यसअघि जेठ २२ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरकालीन आदेशले आजको बहसमा पनि निरन्तरता पाए पुनः मतदान गर्ने आयोगको निर्णय रोकिनेछ भने अन्तरकालीन आदेश बदर भएमा वडानम्बर १९ मा पुनः मतदान गनुपर्ने फैसल...
इटहरी उपमहानगरपालिकामा एमालेको जित, मेयरमा द्वारिकलाल चौधरी,उपमेयरमा लक्ष्मी गौतम विजयी
सुनसरी । सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुबै पदमा एमाले उम्मदेवार विजयी हुनु भएको छ । कांग्रेसका उम्मदेवारलाई फराकिलो मतान्तरले पछाडि पार्दै एमाले मोरङका अध्यक्ष समेत रहनु भएको द्वारिकलाल चौधरी २२ हजार ४ सय १२ मत ल्याएर विजयी हुनु भएको छ । विजेता चौधरीका निकटम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका रोहित प्रसाईले १९ हजार ९ सय ...
कांग्रेसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाईः माओवादी प्रवक्ता
असार २२ २०७४ .
काठमाडौं असार,२२ । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले कांग्रेस भित्रको कलहले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई भइरहेको बताएकी छन् । प्रवक्ता भुसालले काँग्रेस भित्रको गुट, उपगुटले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समस्यामा पारेको बताइन् । उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन अझै हप्ता/दश दिन लाग्न सक्...
मन्त्रिपरिषद् बैठक : सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा न्यायपरिषद् सचिव सुवेदी
असार २२ २०७४ रासस
काठमाडौँ,असार २२- मन्त्रिपरिषद्को बैठकले न्यायपरिषद्का सचिव नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेकोे बैठकले नेपाल सरकार र अष्ट्रेलिया सरकार बीच दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र सचिवलाई अख्तियारी दिने निर्णय ग...
३१८ स्थानीय तहको मतपरिणाम (सूचीसहित), बाँकी तहमा कसको अग्रता ?
काठमाडौं असार,२२ । दोस्रो चरणमा चुनाव भएका ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमध्ये ३१८ स्थानको मतगणना सकिएको छ । अब १६ स्थानीय तहको मात्र मतपरिणाम आउन बाँकी छ । जम्मा १६ स्थानीय तहको मत परिणाम बाँकी रहदा एमालेले कांग्रेसलाई २७ सिट पछि पारेर पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा पनि पहिलो स्थान सुरक्षित गरेको छ । अहिलेसम्म १४२ स्थान जिते...
तुलसीपुर उपमहानगरमा एमालेका घनश्याम र माया भारी मतसहित विजयी
दाङ । दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकामा एमाले विजयी भएको छ । एमालेका मेयरका उम्मेदवार घनश्याम पाण्डेय २२ हजार ८ सय ५७ मत ल्याएर विजयी हनुभएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपालीका कंग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले १८ हजार ९ सय ३ मत ल्याउनुभएको छ । त्यस्तै उपमेयरमा पनि एमालेकै माया आचार्यले २१ हजार ३७ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो । उहाँको निकटतम प...
सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा एमालेको जित
लुम्बिनी ,असार २२ - भैरहवास्थित सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा नेकपा ९एमाले० विजयी भएको छ । २०५४ सालयता कुनै पनि निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न नसकेको एमालेले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पकड जमाएको छ । एमालेले रुपन्देहीका अधिकांश स्थानसहित सिद्धार्थनगरमा पनि झन्डा गाड्न सफल भएको छ । एमालेले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखसहित ६ वटा व...
२८ जिल्लाको मतगणना सकियो, ७ जिल्लाको मतगणना जारी
काठमाडौं, असार २२– असार १४ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमध्ये ३१६ स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल ७ जिल्लाका १८ स्थानीय तहको मतगणना कार्य जारी छ ।आयोगले बिहीबार बिहान जारी गरेको सुचनामा २८ जिल्लाका सबै स्थानीय तहको मतगणना कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ । ...
गठबन्धनलाई घुडा टेकाउदै शिव सुवेदी बने बुटवलको मेयर
बुटवल,असार २१ । नेकपा एमालेका शिवराज सुबेदी बुटवल उप महानगर पालिकाको मेयर बनेका छन । त्यस्तै सोही पार्टिकी गोमा आचार्य उपमेयर बन्न सफल भईन । सुबेदीले २२ हजार ९ सय १७ मत प्राप्त गरेका छन भने २४ हजार ९ सय ६३ मत प्राप्त गर्दै आचार्य उप मेयर बनेकी छन । नेपाली कांग्रेस माओवादी गठबन्धनका मेयरका उम्मेद्धवार खेलराज पाण्डेले २० हजार ४ सय ६१ मत पाएका छन...
मतगणना भइरहेका २६ स्थानीय तहः(सूचीसहित)
असार २१ २०७४ .
काठमाडौं असार, २१। असार १४ गते निर्वाचन सम्पन्न भएका ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमध्ये अब २६ स्थानीय तहको परिणाम आउन बाँकी छ । परिणाम आउन बाँकी रहेका अधिकांश नगरपालिका छन् । पहाडका सबै जिल्लामा मतगणना सकिँदा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका २६ ठाउँको परिणाम अाउन बाँकी छ । तीमध्ये धरान उपमहानगरपालिका र ...
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण ‘छिट्टै’, मिति तय गर्ने जिम्मा राजदूतलाई
काठमाडौं असार,२१ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको मिति छिट्टै टुंगो लाग्ने बताएका छन् । उनका अनुसार भ्रमणको मिति तय गर्ने जिम्मा दुबै देशका राजदूतहरुलाई दिइएको छ । हालै भारतको भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएका मन्त्री महराले बुधबारको संसद बैठकमा भारतमा भएका छलफलबारे जानकारी गराएका...
बुटवलमा एमालेको शानदार जित निश्चित
बुटवल, असार २१ ।दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा चासो र चर्चा मा रहेका बुटवल उपमहानगरपालिका बुटवलमा एमालेको शानदार जित निश्चित भएको छ । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र नं ४ मा पर्ने बुटवल उपमहानगरमा एमालेका उम्मेदवार गणना गर्न बाँकी रहेको मतभन्दा धेरै मत अन्तरले अघि पुगिसकेका छन्। १९ वटा वडा रहेको बुटवलका १८ वटा ...
रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा एमाले विजयी
रुपन्देही असार,२१ । जिल्लाको सियारी गाउँपालिका एमालेले जितेको छ । एमालेका उम्मेदवार अयोध्या थारूले ६ हजार ५२ मत प्राप्त गरेर गाउँपालिका अध्यक्षमा विजय हासिल गरेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका थानेश्वर घिमिरेले पाँच हजार ४०० मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, उक्त गा...
३०४ स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक(सूचीसहित)
काठमाडौं ,असार २१ । दोस्रो चरणमा चुनाव भएका ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमध्ये बुधबार बिहानसम्म ३०४ स्थानको मतगणना सकिएको छ । अब ३० स्थानीय तहको मात्र मतपरिणाम आउन बाँकी छ । अहिलेसम्म १३३ स्थान जितेर नेकपा एमाले अग्रस्थानमा छ । मतगणना भइरहेका १९ स्थानमा अग्रता राख्दै एमालेले दोस्रो चरणमा पनि पहिलो स्थान सुरक्षित गरेको छ । दोस्रो दल बनेको नेप...
कपिलवस्तुका १० स्थानीय तहको मत गणना सकियो
असार २१ २०७४ रासस
कपिलवस्तु असार २१-स्थानीय तह दोस्रो चरण निर्वाचन अन्र्तगत प्रदेश न. ५ मा पर्ने कपिलवस्तुको मतगणना सकिएको छ । ६ नगरपालिका, ४ गाउँपालिका सहित १० वटा स्थानीय तह रहेको कपिलवस्तुको सबै तहको मत परिणाम आइसकेको छ । जसमध्ये २ स्थानीय तह नेकपा एमालेले जितेको छ । ५ स्थानीय तह नेपाली कांग्रेसले जितेको छ ।यस्तै संघिय समाजवादी फोरमले १ स्थान र स्वतन्त्रले २ स...
२ सय ९२ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक
स्थानीय तहको दोस्रो चरणमा असार १४ गते सम्पन्न ३ सय ३४ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९२ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । जसमध्ये एमाले पहिलो स्थानमा छ भने नेपाली काँग्रेस दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमै रहेको छ । सार्वजनिक नतिजाअनुसार एमालेले एक उपमहानगरसहित हालसम्म १ सय २७ स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ । नेपाली काँग्रेसले एमालेलाई प...
निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आयोगको पत्र
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले प्रदेश र संघको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई लिखित रुपमै पत्र पठाउने भएको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले निर्वाचन मिति तोक्न आग्रह गर्नुसाथै प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारको रूपमा रहेको कानून तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनका लागि गृह मन्त्रालयमार्...
२९० स्थानीय तहको चुनावी परिणाम सार्वजनिक, (सूचीसहित)
काठमाडौं असार,२०। दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव भएका ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९० तहको आधिकारिक परिणाम सार्वजनिक भएको छ । एमालेले प्रदेश नम्बर १ मा ५७, प्रदेश ५ मा ३६ र प्रदेश ७ मा ३४ स्थानीय तह जितेर १ सय २७ स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ । यस्तै, कांग्रेस १०८ स्थानीय तह जितेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ । कांग्रेसले हालसम्म प्रदेश नम्बर...
मतगणना अपडेट : महानगर र उपमहानगरमा कसको मत कति ?
असार २० २०७४ .
काठमाडौं असार २०,– २ उपमहानगरपालिकामा मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ विराटनगर महानगरपालिकासहित ५ वटा उपमहानगरको मतगणना जारी छ । यी स्थनामा मतगणना जारी रहँदा नेकपा एमालेले इटहरी, धरान, तुलसीपुर र बुटवल उपमहानगरमा आफ्नो अग्रता अग्रता कायमै राखेको छ । त्यस्तै विराटनगर महानगरमा नेपाली कांग्रेस र धनगढी उपमहानगरमा कांग्रेस र स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच क...
बुटवल उपमहानगरमा कांग्रेसले खाता खोल्योः १३ नम्बर वडामा कांग्रेसका नारायण पुन विजयी
बुटवल, २० असार । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले खाता खोलेको छ । १३ नम्बर वडामा कांग्रेसका नारायण पुन वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । बुटवलमा कांग्रेसले पहिलोपटक वडा जितेको हो । यसअघि १२ वडा एमालेले जितिसकेको छ । बुटवल उपमहानगरको मेयरमा एमालेले अग्रता लिइरहेको छ भने कांग्रेस पछ्याइरहेको छ ।
नयाँ प्रस्ताव ल्याए एमालेले पारित गर्र्ने
काठमाडौं असार २०– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले सदनमा विचारधिन रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावफिर्ता लिएर एमालेको सहमतिमा नयाँ संशोधन प्रस्ताव तयार पारे त्यसलाई पारित गर्र्ने बताएका छन् ।मंगलबार काठमाडौमा भएको साक्षत्कारमा सचिव ज्ञवालीले अहिले संसदमा विचाराधिन रहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै...
गुल्मीका वडामा पनि एमालेको पल्लाभारी
गुल्मी ।स्थानीय निर्वाचनमा गुल्मीका वडामा पनि एमाले वलियो भएको छ । जिल्लामा रहेका ९३ वडामा एमालेले ६० वडामा अध्यक्ष सहित प्यानलै बिजयी भएको छ । कांग्रेस २९ वडामा मात्र प्यानलै बिजयी छ । माओवादी केन्द्र ४ वडा र जनमोर्चा १ वडामा अध्यक्षसहित प्यानलै बिजयी भएको छ । जिल्लामा रहेका १२ स्थानीय तह मध्ये २ नगर रेसुङ्गा नगरपालिकामा ८ वडामा कांग्रेस ६ व...
रुपन्देहीको तिलोत्तमा एमालेको पोल्टामा
वुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमामा एमालेका उम्मेदवार विजयी हुनुभएको छ । नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका बासुदेव घिमिरेले १९ हजार ८४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । निकटतम नेपाली काँग्रेसका रामकृष्ण खाँडको भागमा १६ हजार २ सय ६४ मत परेको छ । उपमेयरमा एमालेकी जागेश्वरी चौधरीको भागमा १९ हजार २ सय २४ मत परेको छ भने निकटतम राष्ट्रिय जनमुक्तिकी गीता सारुको भागमा १६ ...
एमालेले देशैभरी यसकारण जित्यो
असार २० २०७४ कृष्ण गिरी
काठमाडौं असार १९,–पहिलो चरणमा पहिलो भएको नेकपा एमाले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सबै भन्दा ठूलो दल हुने बाटोमा रहेको छ । अहिलसम्मको मत परिणाम अनुसार एमाले १०४ सिटमा विजयी भइसकेको छ । पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा क्रमशः तेस्रो र दोस्रो भएको एमाले. स्थानीय चुनावमा भने कसरी शीर्ष स्थानमा रहन सफल भर्यो । यसको जवा...
रुपन्देहीको सैनामैनामा एमालेको वहुमत
बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार चित्रबहादुर कार्की विजयी हुनु भएको छ । उहाँले १३ हजार ३६ मत प्राप्त गर्नुभयो । प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका फणिन्द्र शर्माको भागमा १० हजार ३ सय ५ मत पर्यो । उपमेयरमा एमालेकै बिना रानाले १२ हजार ९ सय ६१ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उपमेयरमा कांग्रेसकै लक्ष्मी चौधरीको भागमा ९ हजार ७...
दाङको घोराहीमा मेयर–उपमेयर दुवै एमालेकै
असार १९ २०७४ .
घोराही ,असार १९ । एमालेले उपमहानगरमा विजयी सुरुवात गरेको छ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर जित्दै एमालेले उपमहानगरमा विजयी सुरूवात गरेको हो । मेयरमा एमाले उम्मेदवार नरूलाल चौधरी साढे चार हजार मतअन्तरले विजयी भएका हुन् । काँग्रेस उम्मेदवार भुपबहादुर डाँगी पराजित भएका छन् । काँग्रेसको पकड क्षेत्र भनिएको घोराहीमा निकै मतअन्तरले ए...
२४२ स्थानीय तहको परिणाम, (सूचीसहित)
काठमाडौं असार,१९ । दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव भएका ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमध्ये सोमबार मध्याह्नसम्म २ सय ४० तहको आधिकारिक परिणाम सार्वजनिक हुँदा एमालेले अग्रता कायम राखेको छ । एमालेले प्रदेश नम्बर १ मा ४८, प्रदेश ५ मा २६ र प्रदेश ७ मा २९ स्थानीय तह जितेर १ सय ३ स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ । कांग्रेसले ९४ स्थानीय तह जितेको छ । कांग्रे...
बुटवलका १० वडामा एमालेको विजयी, मेयरमा टक्कर
बुटवल असार १९ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको १० वटा वडाको मतगणना सकियो । गणना सकिएका सबै वडाको वडाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । बुटवलमा ६६ हजार ६ सय ६३ मतदातामध्ये ४९ हजार ८ सय ९५ जनाले मतदान गरेका थिए । मेयरमा कांग्रेसका खेलराज पाण्डेयले ११ हजार ७१ मत ल्याएका छन् भने एमालेका शिवराज सुवेदीले १२ हजार २८३ मत ल्याएका छन् । उपमेय...
रुपन्देहीको पाँच गाउँपालिकाको नतिजा सार्वजनिक
रुपन्देही असार,१९ ।१६ वटा स्थानीय तह रहेको रुपन्देहीमा पाँच गाउँपालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । प्राप्त नतिजा अनुसार रुपन्देहीमा दुई गाउँपालिकामा एमाले। दुईमा संघीय समाजवादी र नयाँ शक्ति तथा एक गाउँपालिका प्रमुखमा माओवादी केन्द्रले विजयी हासिल गरेको हो । ओमसतिया गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ । माओवादी केन्द्रका हिराकुमार केवट २४...
कपिलवस्तुको शुद्धोधनमा ‘राजपा’ विजयी
कपिलवस्तु असार १९। पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका राजपाका एक उम्मेदवारले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा जित निकालेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर मैदानमा खडा भएका निसार अहमद खाँ गाउँपालिका प्रमुखमा विजयी बनेका हुन् । खाँले १ हजार ८ सय ३७ मतका साथ जित दर्ता गराउँदा उनका नजिकका प्रतिष्पर्धी अर...
गुल्मीका काँग्रेस जिल्ला सभापति भुवन श्रेष्ठले ठोके राजीनामा
काठमाडौं असार १८ । स्थानीय तह दोस्रो चरणको चुनावमा पार्टीभित्रबाट अर्न्तघात भएको भन्दै गुल्मीका काँग्रेस जिल्ला सभापति भुवन श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन् । रेसुंगा नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार बनेका श्रेष्ठले हारेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको बताएका छन् । श्रेष्ठले आफुले जिल्ला कार्यसमितिमार्फत राजीनामा दिइसकेको बताए । उनले आफ्नै प...
कपिलबस्तुको विजयनगरमा ‘राजपा’लाई हराउँदै एमाले विजयी
असार १८ २०७४ .
कपिलवस्तु असार,१८। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकामा एमाले विजयी भएको छ । अध्यक्षमा गोपालबहादुर थापा र उपाध्यक्षमा लक्ष्मी कुमारी चौधरी विजयी भएका हुन् । थापाले ३ हजार ५१२ र चौधरीले ३ हजार १६१ मत पाएको निर्वाचन अधिकृत थानेश्वर घिमिरेले जानकारी दिए । विजयनगरमा दोस्रो स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु रहे । राजपाकातर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार जा...
विराटनगर महानगरमा १५ देखि २० प्रतिशत मत वदर, मतपत्रमा औंठाछाप
असार १८ २०७४ रासस
विराटनगर असार १८ । विराटनगर महानगरपालिकाको मतगणनामा नेपाली काँग्रेसका प्रमुखका उम्मेदवार भीम पराजुलीले तीन हजार ८७३, नेकपा एमालेका विनोदकुमार ढकालले दुई हजार ७७२ मत र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका उमेश यादवले एक हजार ६३१ मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, उपप्रमुख पदमा काँग्रेसकी इन्दिरा कार्कीले तीन हजार ३५१, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नमीता न्यौपा...
रोल्पामा एक तहको परिणाम आउन बाँकी, नौमध्ये ६ माओवादी
रोल्पा, असार १८ । माओवादीगढ मानिने रोल्पामा अन्य दलले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी हासिल गरेका छन् । दश स्थानीय तह रहेको रोल्पामा हालसम्म परिणाम घोषणा भएका नौ स्थानमध्ये ६ स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्र, दुई स्थानमा नेकपा एमाले र एक स्थानमा नेपाली काँग्रेस विजयी भएका छन् । ७२ वटा वडा रहेको जिल्लामा हालसम्म मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेका ७० वडाम...
गुल्मी पुगेर ओलीले भने, ‘काँग्रेस पूरानो पार्टी पछिपछि आउँदैछ, माओवादीले उधुमै जित्यो’
असार १८ २०७४ प्रेम सुनार
गुल्मी असार १८– नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले जीत्दा उत्ताउलिने र हार्दा निराश हुने पार्टी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । शनिवार गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासको चिदिचौरमा भएको विजयीसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले शुरुवाती चरणको नतिजा आउँदा केही मिडियामा एमाले अत्तालिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको प्रति व्यंग्य गर्दै सो कुरा बताए...
प्यूठानको स्वर्गद्धारी नगरपालिकामा एमालेको जित, काँग्रेस तेस्रोमा
प्यूठान असार १८ । प्यूठानको स्वर्गद्धारी नगरपालिकामा एमालेले जित हासिल गरेको छ । त्यहाँ भएको गठबन्धनलाई निस्तेज पार्दै एमाले अब्बल ठहरिएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चा र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलार्इ हराउँदै मेयर र उपमेयरमा एमाले बिजयी भएको हो । मेयरमा एमालेका नेत्रबहादुर रोकायले ४५९८ मत ल्याउँदा गठबन्धनका वीरबहादुर पुनले ४४५८ मत ल्याए । काँग...
पाल्पामा एमालेको वर्चश्व
पाल्पा असार १८ । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेले विजय हासिल गरेको छ । प्रमुखमा नेकपा एमालेका अशोककुमार शाहीले १० हजार ४५० र उपाध्यक्षमा एमालेकै लक्ष्मी पाठक नौ हजार ७५३ मत ल्याई विजय भएका हुन् । प्रमुखका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका अजयमान कर्माचार्य आठ हजार ०६७ र उपप्रमुखमा नेकाकै लालु रानाले आठ हजार ३८९ मत ...
माघ ७ भित्र सवै निर्वाचन सरकारको प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं असार १८ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई स्थायित्व र विकासको मार्गमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । आईतबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५८ आंंै वार्षिक दिवस स...
नवलपरासीको रामग्राममा कांग्रेस विजयी, नरेन्द्र गुप्ता बने मेयर
नवलपरासी असार,१८ । नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले जितेको छ । नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै कांग्रेसले जितेको हो । कांग्रेसका नरेन्द्रकुमार गुप्ताले ५ हजार ८ सय ५६ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका उमाशंकर चौधरीले ४ हजार ५ सय ३० मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, उपप्रमुखमा रम्...
रुपन्देहीको शुद्धोधनको मेयरमा एमालेका किशुनचन्द्र विजयी
भैरहवा असार,१८। रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा एमाले विजयी भएको छ । अध्यक्षमा विजयी एमालेका किशुनचन्द्र चौधरीले ५ हजार ३ सय ७१ मत पाएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका भगवती प्रसाद थारुले ५ हजार १६ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै उपाध्यक्ष पदमा विजयी एमालेकी शान्तादेवी ज्ञवालीले ५ हजार ३ सय ९० मत प्राप्...
अर्घाखाँचीको पाणिनी अध्यक्षमा कांग्रेस, उपाध्यक्षमा एमाले
अर्घाखाँची असार,१८। अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस र उपाध्यक्ष एमाले विजयी भएको छ । कांग्रेसका अच्युत गौतम एमालेका जिबनारायण कोइरालाभन्दा ४ सय ९२ मतअन्तरले अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । गौतमले ५ हजार ९७७ र कोइरालाले ५ हजार ४८५ मत प्राप्त गरेका छन् । पाणिनी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा भने नेकपा एमाले विजयी ...
रुपन्देहीको कञ्चन गाँउपालिकामा नेकपा एमालले जिते
रुपन्देहीमा असार १८–रुपन्देहीको कञ्चन गाँउपालिकामा नेकपा एमालले जितेको छ । प्रमुख पदमा नेकपा एमाललेका गोकर्ण बहादुर क्षेत्री ६७७७ मतका साथ बिजयी भएका छन् । त्यस्तै उपप्रमुख पदमा नेकपा एमालेका गोमा तरामुले ६९२४ मतले बिजयी भएकी छिन् ।
उपप्रधानमन्त्री महरा भारत प्रस्थान
काठमाडौँ असार १८- उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा आफ्ना भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजको निमन्त्रणामा भारतको तीन दिवसीय भ्रमणमा आज बिहान त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा उहाँले बाह्य मामिलामन्त्री स्वराजसँग पारस्परिक हित र चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । ...